Otu esi etinye kernel Liquorix na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
Fraịde, Jenụwarị 14, 2022 Na Mọnde, Nọmba 16, 2021 by Jọshụa James
Bubata ebe nchekwa kernel Liquorix
Wụnye Liquorix Kernel
Otu esi emelite kernel Liqourix
Otu esi ewepu (wepụ) Liqourix Kernel
Liquorix kernel bụ Linux Kernel n'efu, mepere emepe-isi iyi izugbe maka kernel ngwaahịa ya na Debian 11 Bullseye. Ọ nwere ntọala omenala yana atụmatụ ọhụrụ wee wuo ya iji nye ahụmịhe desktọpụ na-anabata ma dịkwa mma, ọkachasị maka ngwaike ọhụrụ. Liquorix Kernel bụ ewu ewu n'etiti Linux Gaming, nkwanye, na ultra-latency chọrọ ma na-anya isi Linux Kernels ọhụrụ, na-enwe ọtụtụ alaka ịhọrọ site na kwụsiri ike, nsọtụ, na mmepe.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi ebubata ebe nchekwa Liquorix kernel wee wụnye Linux Kernel kacha ọhụrụ na Debian 11 Bullseye gị.
Ọrụ mbụ bụ ibubata ebe nchekwa kernel Liquorix. Maka ndị ọrụ Debian, nke a dị mfe dịka enwere script bash nke otu Liquorix mepụtara nke enwere ike ibudata ma megharịa mbubata.
Ọ bụrụ na iwu ndị a dị n'elu daa, ngwugwu curl karịa ka etinyere ya. Iji dozie nke a, jiri iwu njedebe na-esonụ.
Iwu ahụ ga-etinye iwu bash na-akpaghị aka ka itinye aka na edemede wee bubata ebe nchekwa ahụ. Ozugbo emechara, ị ga-ahụ ntuziaka Liquorix na njedebe nke njedebe njedebe gị.
Iji nyochaa ọzọ, ị nwere ike iji iwu grep lelee ọdịnaya faịlụ ahụ.
Dịka ọ dị n'elu, ebubatala ebe nchekwa ndị ahụ nke ọma. Ọzọkwa, site na ndabara, a na-ekwupụta enyo ahụ ka ịzere okpukpu abụọ.
Na-esote, na ebudatara script bash na ebe nchekwa ugbu a emelitere, ị nwere ike ịmalite ntinye nke kernel Liquorix.
N'ọnụ ọnụ gị, jiri iwu a ka ịmalite nrụnye.
Iji dowe kernel Linux nke ị rụnyere na Liquorix ruo ugbu a, ị ga-emelite iwu nkwalite dabara adaba na ọkọlọtọ.
Iji wepụ Liquourix Kernel, jiri iwu na-esonụ.
ỊDỌ AKA NA NTỊ - Ọ bụrụ na i wepụghị kernel Debian 11 ndabara, ị nwere ike ịga n'ihu n'okpuru. Ọ bụrụ na ọ bụghị, tinyegharịa kernel ndabara. Site na ndabara, ị ga-enwe kernel dị na sistemụ gị. Ị ga-ama ma i wepụrụ ya ma ọ bụ na ị chọghị.
Nke a ga-ewepụ kpam kpam n'ụzọ niile nke Liquorix Kernel nwere ike ime yana dabere na-ejighị ya.
N'aka nke ọzọ, iwu a dị mkpụmkpụ na-achọkarị ịrụ ọrụ nke ọma.
Dị ka ọ dị n'elu, ị darala azụ na ndabara Linux Kernel nke Debian 11 Bullseye.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye Liquorix Kernel na Debian 11 Bullseye. Emebere Liquorix Kernel maka ndị ọrụ desktọpụ nwere ngwaike kachasị ọhụrụ, mana enwere ike itinye nke a na desktọpụ ma ọ bụ nkesa Debian ọ bụla. Otú ọ dị, a na-adụ ọdụ ka ị nyochaa tupu ịkwalite, ọ dịghịkwa aro ka iji ya na usoro dị egwu ma ọ bụ mmepụta ihe.
Enwere ụfọdụ arụmụka n'etiti Liquorix vs. XanMod ma ọ bụ ihe ndị ọzọ yiri ya. Dị ka o kwesịrị, Liquorix adịghị akwado maka mkpụrụ ndụ ọnụ na-agba ọbara kachasị ọhụrụ dị ka XanMod kama ọ na-elekwasị anya na ụfọdụ kernels kachasị ọhụrụ bụ ndị kwụsiri ike ma na-arụ ọrụ nke ọma, nke na-enye ndị ọrụ obi ike, nkwụsi ike, na n'ikpeazụ, arụmọrụ ma e jiri ya tụnyere ndị na-adịghị akwụ ụgwọ. uzo ozo. Nke a, Otú ọ dị, bụ arụmụka, na nhazi dị iche iche ga-enweta uru na ọghọm ndị ọzọ.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Linux kernel, Liquorix kernel Mail igodo
Otu esi etinye kernel Liquorix na Ubuntu 20.04